Ufikelelo lwezondlo lweKhaya-iBhanki yokutya yaseGalveston County
Ukufikelela kwabantwana kwisondlo
Ukufikelela kuncedo lwezasekhaya
Uncedo lweeNkonzo zeNtlalo
Fumana uNcedo lokutya
BHEKA UKUTYA / FUND UKUQHUBA
Ukutya kunye neeFund Drives
Yabelana ngeeholide zakho
Cwangcisa iSithethi soNdwendwe
NIKELA IINKXASO-MALI NAMHLANJE
EZINYE IINDLELA ZOKUNIKELA
Inkqubo yokufikelela ebantwini
Abantu abakhubazekileyo kunye nabantu abadala ngabona bantu bethu basemngciphekweni. Inkqubo yeBhanki yokutya yaseGalveston County yeNkqubo yokuSondeza iSondlo inceda abantu abajongene nokunqongophala kokutya kwaye bavalelwe kumakhaya abo ngenxa yokukhubazeka okanye imiba yezempilo. Inkqubo yethu yokuhanjiswa kwekhaya izisa ukutya okufuneka kakhulu kwaba bantu ngekhe bafumane ngaphandle.
Zithini iimfuno zokufaneleka?
Abantu kufuneka babe yi-60 yeminyaka ubudala nangaphezulu okanye abakhubazekileyo, bahlangane nezikhokelo zengeniso ye-TEFAP, bahlala eGalveston County, abakwazi ukufikelela kwindawo yokuhlala okanye indawo ehambayo yokufumana ukutya.
Kukangaphi umntu ofanelekileyo efumana ukutya?
Ibhokisi yokutya ihanjiswa kube kanye ngenyanga.
Ndilivolontiya njani le nkqubo?
Nxibelelana no-Kelly Boyer nge-imeyile kelly@galvestoncountyfoodbank.org okanye ngomnxeba 409-945-4232 ukufumana ipakethi yamavolontiya aphuma ekhaya.
Iqulathe ntoni ibhokisi yokutya?
Ibhokisi nganye inama-25 eepawundi zezinto zokutya ezingonakaliyo ezinje ngerayisi eyomileyo, ipasta eyomileyo, imifuno enkonkxiweyo, iziqhamo ezinamathanga, isuphu enkonkxiweyo okanye isityu, i-oatmeal, ukutya okuziinkozo, ishelfu yobisi oluzinzileyo, ishelufu ezinzileyo.
Ngubani ohambisa iibhokisi zokutya?
Iibhokisi zokutya zisiwa kubantu abafanelekileyo ngamavolontiya. Wonke amavolontiya ayavavanywa kwaye kufuneka acoce imvelaphi yokuthabatha inxaxheba kule nkqubo kwiinzame zokuqinisekisa ukhuseleko lwabamkeli.
Ndisifaka njani isicelo senkqubo yokubuyela ekhaya?
Nceda ugcwalise ipakethi yesicelo esibuyela ekhaya kwaye ulandele imiyalelo ekwiphepha 2.
Khuphela iPakethe yeSicelo sokufikelela kwiKhaya
Amathuba amavolontiya kunye neNkqubo yokuhanjiswa kweKhaya
Sinesidingo senyanga kuye nabani na ongathanda ukuba nethuba lokuvolontiya elingaguqukiyo lokuthatha iibhokisi eziBuyiselwe ekhaya zabantu abadala kunye nabakhubazekileyo kulo lonke iGalveston County. Eli lithuba lokuzithandela kanye ngenyanga kwaye amavolontiya kufuneka agqibe ukujonga imeko yangasemva. Nxibelelana noKelly Boyer ku Kelly@galvestoncountyfoodbank.org ufuna ulwazi olungolunye.
Ukuba livolontiya eliphuma ekhaya kwiBhanki yoKutya yaseGalveston kuye kwazaliseka kum kodwa ngakumbi kubantu endibakhonzayo. Babulela kakhulu ngebhokisi yokutya. Elinye inenekazi ngoko nangoko lakhupha iimbotyi eziluhlaza engxoweni ngenye imini laza laqalisa ukupheka. Ndaqonda ngoko ukuba isenzo sam esilula sokuthutha ezi bhokisi zokutya sasixatyiswa yaye siyafuneka. Undwendwelo lwam lusenokuba lolwabo kuphela loo veki okanye loo nyanga. Xa ndiphuma kowabo ndimane ndisithi, Nibe nosuku oluhle ndizokubona kulenyanga izayo. Elinye inenekazi ngokukodwa lihlala lisithi “hlala ukhuselekile Nkosazana Veronica”. Senze ubuhlobo! Kufuneka amavolontiya angakumbi. Ukusuka ekuthathweni ukuya ekuhanjisweni kungaphantsi kweyure. Nceda ucinge ngokubhalisa namhlanje. Kuluncedo kakhulu!”
UVeronica ube livolontiya ngenkqubo yethu yonikezelo lwasekhaya ngaphezulu kweminyaka emi-3 1/2 kwaye uye wancedisa nakwezinye iindawo.
624 4th Ave N., eTexas City, 77590
9am - 3pm (NgoLwesibini-Lwesine); 9am - 12pm (ngolwesiHlanu)
Imisebenzi yeShishini Bldg:
Iiyure ze-Ofisi: 8am - 4pm (ngoMvulo-Lwesihlanu)
Cofa apha ukuze ukhethe ii-imeyile
Ibhanki yokutya yaseGalveston County ibhaliswe njenge-501 (c) (3) inhlangano engenzi nzuzo. Igalelo litsalelwa irhafu ukuya kuthi ga kwinqanaba elivunyelwe ngumthetho. Ibhanki yokutya yaseGalveston County ikholelwa ekuqhubeni ishishini ngokunyaniseka okukhulu kunye nokunyaniseka. IiNkonzo zeNdlu yokuKhanya ivumela i-Galveston County Food Bank ukuba ixhase le migaqo ngokusebenza njengesixhobo samalungu oluntu, kubandakanya nabasebenzi beBhanki yokutya, ukungenisa iingxelo eziyimfihlo, iingcebiso, okanye izikhalazo kumntu wesithathu onceda ulawulo lweGalveston County Food Bank ukusombulula imiba ngelixa igcina ubungcali imigangatho. Eli ziko libonelela ngamathuba alinganayo.
Nceda ucofe apha ukuze ufunde uMgaqo-nkqubo wabaNikeli.
Copyright © 2021 IGalveston County Bank yokutya - Onke amalungelo agciniwe. Ixhaswa ngu Get Social!